Xakamaynta phsibaha Gmail waa khiyaano xitaa macaamiisha si fiican loo wargeliyo | ITS
Fariinkan cusub ee Gmail waa khiyaanayn xitaa macaamiisha la wargeliyey: Waa kuwan sirta ah ee lagu aqoonsanayo
Falanqeeyayaasha amniga ee WordFence oo ah naqshad caan ah oo ah qalabka nabadgelyada ayaa soo bandhigay waxa ay ugu yeerayaan waa "faa iido adag" khayaano ah oo kufsi ah macaamiisha Google Gmail si ay u ogaadaan waxyaabaha ay ku duuban yihiin. Mucaaradku waxay ku andacoodeen in ay ka soo horjeedeen macaamiisha maamulka emailka waxayna ka kooban yihiin dabin toos ah oo xitaa indhaha ugu diyaarka leh ay u maleynayaan in ay adagtahay in ay wax ka qabato. Ka dib markii uu kala soocay khayaanadaas, WordFence waxay ku dhawaaqday isku mid ah boggooda oo ay ka digtay weerarka.
Khiyaamadda phishing waa qorshe aad u qumman. Macaamilka ama macmiilka Gmail ayaa marka hore helaya email ka ah waxa macmiilku u arko inuu ku kalsoon yahay xiriirka. Ku lifaaqan emailka ayaa ah waxa uu leeyahay dhamaan calaamadaha muujinaya inuu yahay diiwaan caadi ah ee naqshadeynta .pdf. Macaamiisha shakiga leh ee leh hibada ee soo dejinta xidhiidhku waxay ogaan doontaa wax ka soo horjeeda soo socda ee soo socda.
Ku dhajinta xayndaabka arjiga qaybta ugu badan waxay siinaysaa macaamiisha dib u eegista warbixinta. Inaad ku xirto xiriirkan, hase yeeshee, wuxuu kuu geyn doonaa calaamad ahaan bogga Google si aad u hesho aruurinta. Macaamiisha aan sharciga lahayn ayaa ku jiri doona emailkooda iyo furaha qarsoodiga ah oo sii wadaan.
Macluumaadka Gmail URI
Tilmaamahan bogga waa marxaladda labaad ee khasaare xamaasadaysan. Dhab ahaantii waxay qaadataa macaamiishu waxa ay leedahay dhamaan calaamadaha dareenka ah ee wanaagga 'Soo gal bogga Google'. Macmiilka macaamilka ah waxaa ku jiri doona aqoonsigooda oo aan ogeyn in kuwan xariifka ah si macquul ah loogu diro iskudubarid xogta.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si loo kala saaro
Macluumaadka ku habboon ee macluumaadka halkan waa URL ee bogga. Waxay udeedhaa "data.text / html.https ..." dhab ahaantii sida blogku keenay wuxuu sheegaayaa macluumaadka URI iyo ma aha URL. 'URI macluumaadka' oo loo isticmaalay qayb ka mid ah qorshahan ayaa ku dhex jira rikoorka guud ee barmaamijka barnaamijka.
Marka ay macaamiishu xakameyso waxa uu / ay ku ansaxayaan waa isku xirka dib u eegista warbixinta emailka, waxay dhab ahaantii fureysaa dukumiinti kale ee tab 'Ku soo gal bogga Google') oo kaliya in kan kani uu been yahay oo xogtaada u diro gardarada.
Qeybta labaad ee macluumaadka si aad u kala soocid khayaanada kalluumeysiga ayaa asal ahaan ka soo jeeda tweet muujinaya sida soo socota. Waxay u keentaa, in habka ugu wanaagsan ee lagu aqoonsan karo ay tahay haddii aad dhacdo in aad leedahay shaashad aad u saraysa oo muujinaysa in xiriirka dib-u-eegista arintani dhab ahaantii tahay sawir qalafsan (maadaama uusan midna cabbirin) kaas oo furaya dukumintiga. Marka laga hadlo suurtagalnimada in ay ahayd mid si xawli ah loola xiriiri karo, waxa ay si sax ah u barbar dhigi lahayd, haddana mar labaad waa wax uun laba macaamil oo ogaanaya, qaar badanna way dhaafi lahaayeen fursad wayn.
On fursada aad weli baaritaan, weli blog ah u fiirsanayaa in aad tagi kartaa hasibeenpwned.com oo ka hubso email aad ka this site this lagu kalsoon yahay.
Ilaa heerkee ayaa macaamiilkan halkaa ka baxay?
Sida laga soo xigtay barta blog by Mark Maunder, macaamilka ayaa lagu xisaabiyey toddobaadkii la soo dhaafay. Waa maxay xoogaa ku adkeynaya in lagu xisaabiyay macaamiisha aasaasiga ah, laakiin waa mid khaas ah ama la kulma macaamiisha kuwaas oo ku dhuftey in lagu garaaco. Xaqiiqo ayaa loo sheegaa, waxaa jira xitaa xitaa Google ayaa samayn kara si looga hortago weerarrada noocaan oo kale ah sida ku dhawaaqidda ka timid Google:
"Waxaan ka fikireynaa arrintan oo ay sii wadaan xoojinta maslaxadeena. Waxaan ka caawinnaa macaamiisha inay ka xajistaan ​​weerarrada phishing ee siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan: aqoonsiga mashiinka ku salaysan aqoonsiga farriimaha phishing, ogeysiisyada Browsing Safe oo talinaya macaamiisha khatarta khatarta ah ee farriimaha iyo barnaamijyada, ka fogaanshada calaamadaha diiwaangelinta shakiga leh, iyo cirka waa xadka laga bilaabo halkaas. Macaamiisha ayaa sidoo kale sameeyn kara xaqiijinta laba marxaladood ee ku saabsan amniga diiwaanka dheeraadka ah. "
Sidee ayaad iskaga ilaalin lahayd weerarrada noocaas ah?
Haddii ay dhacdo inaad u maleyneyso inaad tahay dhibane, waxa ugu fiican ee la sameeyo waa bedelida furahaaga qarsoodiga ah, tan waxaa la siiyaa qofka dembiilaha ah ee aan hadda kaa haynin diiwaankaaga adiga oo sidaas sameeya. Waxaad sameyn kartaa boombal si aad u aragto haddii qof kale ku calaamadiyey diiwaankaaga. Waxaad samayn kartaa tan adigoo furaya diiwaankaaga Gmail ka dibna ka dibna ku yaal dhinaca midig, ku dheji faahfaahinta.
Haddii ay dhacdo in aan lagu weerarin, oo aad ka shakisan tahay in aad ku dhejin kartid isku xirnaantaas isbuucyadii dhowaa, haddana waxay noqonaysaa wakhti habboon oo lagu beddelo furaha qarsoodiga ah.
Maaddaama Google uu fiiro gaar ah u leeyahay, habka ugu fiican ee lagu sugi karo amniga, waa in lagu xoojiyo laba cad oo marxaladda ama hubinta amniga dheeriga ah.
Macaamiisha emailkiisa iyo erayga qarsoodi ah, dembiiluhu wuxuu samayn karaa wax kasta oo uu jecel yahay shahaadooyinka. Sidaas darteed xaqiiqda waxa ay si fiican u fiican tahay inaad beddesho eraygaaga qarsoodiga ah ee Gmail hadda ka dibna si ammaan ah.